Home » Hawaii Travel News » Fizahan-tany any Hawaii: 82 isan-jaton'ny mpitsidika no faly amin'ny diany
Talohan'ny nahatongavany tany amin'ireo nosy, saika ny ankamaroan'ny mpamaly dia nahafantatra ny baikon'ny governemanta eo an-toerana mba hisorohana ny fihanaky ny viriosy.
Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia nanome ny dian'izy ireo ho “Tsara
Ny 92 isan-jaton'ny mpitsidika dia nilaza fa ny diany tany Hawaii dia nihoatra ny zava-bitan'izy ireo
85 isan-jaton'ny valinteny nilaza fa nilamina tsara ny fepetra takiana amin'ny fitsapana mialoha ny dia ho azy ireo
The Hawaii fizahan-tany fizahan-tany (HTA) dia namoaka ny valin'ny fandalinana fikarohana manokana, izay nanadihady ireo mpitsidika avy amin'ny tanibe amerikana izay nitsidika Hawaii ny 12 febroary hatramin'ny 28 feb 2021, mba handrefesana ny zavatra niainany tamin'ny fandaharanasa Safe Travels an'i Hawaii sy ny fahafaham-po amin'ny dia rehetra. Tonga roa volana aorian'ny vita ny fandinihana voalohany. Amin'ity fandalinana farany ity, ny ankamaroan'ny mpitsidika (82%) dia nanisy ny diany ho "Tsara", ary ny 92 isan-jato nilaza fa ny diany dia nihoatra ny zava-nandrasana. Valo ambin'ny valompolo isanjaton'ny valinteny no nilaza fa hanome soso-kevitra ny hitsidika an'i Hawaii ao anatin'ny enim-bolana manaraka izy ireo, ary nitombo hatramin'ny 90 isan-jato izany raha esorina ny quarantine.
Ny fandaharan'asan'ny Travel Safes an'ny Hawaii dia mamela ny ankamaroan'ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana sy any amin'ny faritra misy eo an-toerana hamaky ny quarantine 10 andro tsy maintsy atao miaraka amin'ny valin'ny COVID-19 NAAT tsy mandeha amin'ny laoniny avy amin'ny mpiara-miasa amin'ny fitiliana azo antoka. Ny fitsapana dia tokony hatao alohan'ny 72 ora aorian'ny fiaingana farany ary ny vokatra ratsy dia tsy maintsy raisina alohan'ny hiaingany any Hawaii. Nandritra ny volana febroary, ny distrikan'i Kauai dia nanohy nampiato vonjimaika ny fandraisany anjara amin'ny programa Safe Travels ho an'ireo mpandeha lavitra Pasifika izay nanana ny safidiny handray anjara amin'ny programa fitsapana mialoha sy aorian'ny fitsangatsanganana amin'ny fananana "bubble resort" ho fomba hanafohezana ny fotoanany ao amin'ny quarantine.
Ny traikefa fanandramana mialoha ny dia ho an'ny mpitsidika dia nihatsara tamin'ny isa enina hatramin'ny nanombohana ny fanadihadiana tamin'ny Desambra, miaraka amin'ny 85 isanjaton'ireo namaly nilaza fa nilamina tsara ny fepetra takiana amin'ny fitsapana ho azy ireo. Anisan'ireo nanambara fa niaina olana tamin'ny fizotry ny fitsapana mialoha ny dia, 51 isan-jato no nilaza fa nahatsapa ho tsy mitombina ny fikandrana 72 ora, 28 isan-jato no nisedra olana tamin'ny fitadiavana mpiara-miasa amin'ny fitiliana azo antoka, ary ny 24 isan-jato nilaza fa ny vidin'ny fitsapana dia avo loatra.
Talohan'ny nahatongavany tany amin'ireo nosy, saika ny ankamaroan'ny mpamaly dia nahafantatra ny baikon'ny governemanta eo an-toerana mba hisorohana ny fihanaky ny viriosy ary misy orinasa sy toerana manintona sasany voafetra ny fividianana azy ireo na takiana mba hiasa amin'ny fahaizany mihena.
Ny fanadihadiana dia nanontany ny mpitsidika koa hoe isaky ny inona izy ireo no manaraka ny torolàlana COVID-19, ary ny 90 isan-jaton'ireo namaly dia nilaza fa nifikitra tamin'ny fanidiana ny masaka rehetra na ny ankamaroan'ny fotoana, 83 isan-jato no nilaza fa nanao fanavahana ny fiaraha-monina na ny ankamaroan'ny fotoana ary 69 isan-jato. nilaza izy ireo fa nanalavitra ny fivoriambe rehetra na matetika.
Ny Diviziona Fikarohana momba ny fizahan-tany ao amin'ny HTA dia niara-niasa tamin'ny Fikarohana momba ny Antolojia mba hanaovana ny fanadihadiana an-tserasera teo anelanelan'ny 8 martsa sy 10 martsa 2021, ho ampahany amin'ny fifanarahana ho an'ny fahafaham-pon'ny mpitsidika sy ny fandalinana ny hetsika.